Ummeli weKurapat: Umkhosi we-militaman no-Akrestin waboshwa waza waboshwa ngokuxhasa ababhikishi - uHienaLouca
Ummeli u-Kurapat: Umkhosi we-militiaman-Akrestin waboshwa waza waboshwa ngokuxhasa ababhikishi
Igosa likaPhoyisa uMikhail Gromyko owayevela entolongweni e-Akrestsin Street wajoyina ukukhusela i-Kurapat 30 Juni. Kungekudala emva koko, iphoyisa laxoshwa kwaye lagwetywa ukuboshwa kolawulo, apho wayekhonza khona apho wayesebenzele khona kungekudala.
Oku kwabikwa ngu-12 Julayi Leonid Kulakov kwitafile ejikelezileyo ekukhuseleni kweKurapat, ubhala "Ixesha elitsha."
Umhla wokuxothwa kunye novavanyo lukaMikhail Gromyka akazange abizwe. Kuyaziwa ukuba kufuneka kukhutshwe ngoJuni 11.
Ekuqaleni kukaJulayi, amalungu e-6 esenzo kufuphi nevenkile yokudlela "Masihambe siye kudla" bagwetywa ukubanjwa kolawulo. I-4 Julayi ukwenzela ukuba ukhuseleko lwaseKurapat luhlawulise nosihlalo weqela le-BPF Grigory Kostusev kunye nenye yeenkokheli zentlangano yeSolidarity "Together" Vyacheslav Siuchyk.
Ngemivalo kuhlala nabanye abakhuseli baseKurapat: Maxim Vinyarsky и UAlexey Turovich, wagwetywa ngo-4 Julayi kwiintsuku ze-10.
Yintoni ebalulekileyo ukwazi ngeengqungquthela ezibhekiselele kwindawo yokutyela entsha eKurapaty
Indawo yokudlela "Masihambe siye kudle" eKurapaty ekuthiwa izuze kusihlwa i-5 Juni.
Abasebenzi abasemagqabini yonke imihla isisiti se 31 i-picket yoonwabo, efuna ukuvalwa kwayo.
I-1 yokutya kweJuni "Maye siye kudla" yaqala ukupapashwa kwi-Intanethi.
I-28 Meyi wenkululeko yawela kummandla Inkathazo, apho yabona ukulungiselela ukuvula ngokukhawuleza kwendawo yokutyela.
27 Juni, iindwendwe kwivenkile yokutyela ngeemoto zishaya inzululwazi uLeonid Kulakov, unengalo ephukile.
Akusaziwa ngokuqinisekileyo ukuba ngubani umnini wevenkile. Idilesi yakhe ihambelana kunye nekheli le-LLC "Amizbel", abameli balo abaya kudibanisa. Ngaphambili ingxelo, ukuba inkathazo yile nkampani "BelRastInvest".
Indawo yokutyela imi emva kweemitha ezili-50 ukusuka kwindawo apho kwi-1930-e kwakukho ukubulawa kwabantu. AbaPunisher be-NKVD badutshulwa apha ukusuka kwi-30 lamawaka ukuya kwi-250 abantu abayiwaka.
Ukwakhiwa kwezakhiwo zokuzonwabisa ezithi "iHolo yeBulgash" yaqala ngonyaka we-2012 kwindawo ekhuselekileyo yaseKuropat. Kwindawo yezokuphepha ye-2014-m ncitshiswa. Imbali yokwakha nomzabalazo apha.
Ukhuselo lokuqala loluntu lwaseKurapat kwenzeka kwi-2001-2002, xa ulutsha lubhikisha ngokusasazwa kwendlela ejikelezayo. Ekuqaleni kwe-2017, abazingeli zi khuselwe Kurapaty ukusuka ekwakhiweni kweziko leshishini.
Ukubuyiselwa kukaStalin kunye neKurapaty
EBelarus, ukunyanzelwa okukhulu kwaqala xa amaBolsheviks aqala ukusebenza kwi-1917. Yaye yaphela xa uStalin efa-kwi-1953. Abaphandi bakholelwa ukuba babephantsi kwabangama-600 abantu awakawaka. Ngokwezinye iziqikelelo, eli nani lifikelela kwi-1,4 yezigidi. Kodwa inani elichanekileyo lingaziwa - i-KGB ayizange idibanise i-archives. Ngokweziqikelelo ezahlukeneyo, ukusuka kwi-30 ukuya kwi-250 abantu abayi-NKVD abahlawuli idubule kunye ne-1937 iminyaka ye-1941 eKurapaty-ihlathi eduze neMinsk.
(Iimbono ezipheleleyo: Ixesha le-326, ukutyelelwa kwe-1 ngosuku)
INorth Korea yaseNyakatho ayinelisekanga ngeziphumo zentetho kunye noPampeo
"Bellegprom" exhaswe "oosomashishini beenkcaso" malunga nokuhweba okungenakuqinisekiswa kwe-Asia ...
Inyanga ende kunaleyo kwinyanga ukusuka kwiindawo ezahlukeneyo emhlabeni. VZHIVUYU
"Kubalulekile ukuba utshatile, ube ngumama kwaye ube mnandi." Wathini umlawuli wefilimu waseFransi ...
Post Previous:Uvalelwe "kwimeko yoogqirha." Uluhlu luhlaziywa. VIDEO
Okulandelayo Post:"Imakrofoni ye-Shadow kwi-anus"